आचारसंहिताविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्री चुनावी प्रचारमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कुनै सार्वजनिक निकायको स्रोतसाधन तथा सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर लिएर चुनावी दौडाहामा
वैशाख २५, २०७९ घनश्याम गौतम
रूपन्देही — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँडेका छन् । गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न उनी जिल्ला दौडाहामा निस्केका हुन् । शनिबार रूपन्देहीको बुटवल र तनहुँ पुग्न देउवाले नेपाली सेनाको एनए ०५८ हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका छन् । सेनाको हेलिकोप्टर ८ सिट क्षमताको हो । हेलिकोप्टरमा देउवासँगै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि सवार थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ४ क मा ‘कुनै सार्वजनिक निकाय वा परियोजनाका स्रोतसाधन तथा सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीले उक्त दफाविपरीत नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका हुन् । बुटवलको कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शनिबार बिहान पौने १२ बजे बुटवलस्थित नेपाली सेनाको २२ नं. वाहिनीमा उत्रिएका थिए । त्यहाँ उनलाई गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणसहितका स्थानीय नेता र सुरक्षाकर्मीले स्वागत गरे । प्रधानमन्त्री देउवा सेनाको हेलिकोप्टरबाट उत्रिएफछि कार्यक्रमस्थलसम्म जान स्थानीय कार्यकर्ताको सेतो कलरको ल्यान्डत्रुजर गाडी चढेर थिए । कार्यक्रममा झन्डै १ घण्टा बिताएका उनले ८ मिनेट भाषण गरे र त्यही हेलिकोप्टरमा तनहुँ पुगे ।
निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारका अधिकारी र स्थानीय तहमा राजीनामा नदिएका जनप्रतिनिधि आफू उम्मेदवार भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा दलको चुनाव प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पनि रोक लगाएको छ । आचारसंहितामा ‘सरकारी अंग वा अधिकारीहरूले आफैं उम्मेदवार भएको खण्डमा बाहेक प्रचारप्रसार गर्न नपाउने’ पनि उल्लेख छ । तर, देउवाले बुटवलमा गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘गठबन्धनका उम्मेदवारले नजिते प्रजातन्त्र संकटमा पर्ने’ बताए । प्रजातन्त्रको रक्षा र गणतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गठबन्धन बनेको र त्यसका उम्मेदवारलाई जिताउन उनले आग्रह गरे । ‘प्रजातन्त्रको भविष्यका लागि स्थायी रूपमा कसैले शंका गर्न नसक्ने ठाउँमा ल्याउन अहिलेको गठबन्धन बनेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले गठबन्धनका सबै उम्मेदवारले जितेनन् भने प्रजातन्त्र पनि संकटमा पर्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अत्यन्तै ठूलो अत्याचारका कारण पनि गठबन्धन जन्मिएको बताए । विरोध गर्नकै लागि प्रजातन्त्र आए पनि ओलीले विरोध गर्दा संसद् नै भंग गरिदिएकाले गठबन्धन जरुरी रहेको स्पष्टीकरण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले दिए । ‘विरोध गर्नकै लागि प्रजातन्त्र हो । अरूले विरोध गरेपछि पार्लियामेन्ट नै भंग गरिदिने ?’ उनले भने, ‘अहिलेको संविधानले रहरका आधारमा, लहडका आधारमा जथाभावी संसद् भंग गर्न दिँदैन तर ओलीजी पार्लियामेन्ट चल्न नि नदिने, भंग गरेको गरै गर्ने अनि तपाईंहरूले उहाँको पार्टीलाई जिताएर के गर्ने ?’ गठबन्धनको सरकार बनेपछि जनताले राहत पाएको र स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराएपछि विकासको सुरुवात हुने उनले बताए ।
सभामा सहरी विकासमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले पनि गठबन्धनका दलहरूको पक्षमा मत मागेकी थिइन् । झाँक्री पनि तीन दिन गृहजिल्ला गुल्मीको चुनावी प्रचारप्रसारमा सहभागी भएर शनिबार बुटवल आएकी हुन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डे प्रमुख र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चीनबहादुर गुरुङ उपप्रमुखका उम्मेदवार छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा एमाले र गठबन्धनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । मत तान्न केन्द्रीय नेताको दौडधुप बढेको छ । बुटवलकै निर्वाचनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार बुटवल आउने कार्यक्रम तय भएको एमाले जिल्ला सचिव यज्ञ गैरेले बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत लेखनाथ पौड्यालले प्रधानमन्त्री पदीय हैसियतमै पार्टीका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा हिँड्नु आचारसंहिताविपरीत हुने बताए । ‘यो विषयमा आज नै निर्वाचन आयोगबाट पार्टीलाई सचेत गराइएको भन्ने पत्र प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, फेरि आजै पनि प्रधानमन्त्रीले सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको भन्ने सुनियो । यो विषय पनि आयोगबाटै सम्बोधन होला, तपाईं–हाम्रो लेबलबाट केही सम्भव देखिँदैन ।’ स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पदीय हैसियतमा कार्यक्रममा सहभागी हुन र भोट माग्न बन्देज गरेको उनले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ ०८:०९
लुम्बिनी प्रदेशका तीन पालिकामा एमाले–माओवादीबीच तालमेल
वैशाख १९, २०७९ घनश्याम गौतम
रूपन्देही — केन्द्रको निर्देशनविपरीत लुम्बिनी प्रदेशका तीन स्थानीय तहमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको छ । गुल्मीका दुई र प्यूठानको एक पालिकामा दुई दलबीच तालमेल भएको हो । त्यस्तै रोल्पा र पूर्वी रुकुममा कांग्रेस र एमालेबीच पनि तालमेल भएको छ ।
गठबन्धनकै दल कांग्रेससँग सहमति जुट्न नसकेपछि माओवादीका स्थानीय नेताले एमालेसँग तालमेल गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला गुल्मीका दुई स्थानीय तह र प्यूठानको एक स्थानीय तहमा एमालेसँग तालमेल भएको हो । एमाले गुल्मीका नेता बालसिंह काउछाका अनुसार गुल्मीका धुर्कोट गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष र एमालेले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरिएको छ ।
त्यस्तै, गुल्मीकै कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एमालेले अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरिएको छ । धुर्कोटमा माओवादीका भूपाल पोखरेल अध्यक्ष र एमालेकी सीता गिरी उपाध्यक्षको उम्मेदवार छन् । वडामा सबै एमाले छ । धुर्कोटमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका महेन्द्र भण्डारी र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी चन्द्रबहादुर सुनारले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । धुर्कोटमा यसअघि माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनबाट माओवादीका पोखरेलले अध्यक्षमा जितेका थिए । त्यो गठबन्धनको समयमा माओवादीले अर्कोपटक कांग्रेसलाई अध्यक्षमा सहयोग गर्ने सहमति गरे पनि अहिले पालना नगरेर घात गरेको गठबन्धनबाट कांग्रेसका अध्यक्ष बनेका भण्डारीले बताए ।
कालीगण्डकीमा एमालेबाट अध्यक्षमा रामजी ढकाल र उपाध्यक्षमा माओवादीकी मञ्जु दर्लामी मगर छन् । कालीगण्डकीमा वडा नं. २ र ४ मा माओवादीले वडाध्यक्ष लिएको छ । कालीगण्डकीमा कांग्रेसका वेद थापा मगर अध्यक्ष र जनमोर्चाकी तारा थापा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी छन् । केन्द्रबाट गठबन्धनका शीर्ष नेताले पटक–पटक गठबन्धनभित्रै सहमति गर्न र अर्को दलसँग गठबन्धन नगर्न निर्देशन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको हो । गुल्मीकै रेसुंगा नगरपालिकामा पनि माओवादीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गठबन्धनको विरोध गरेको छ । रेसुंगा नगरपालिकामा गठबन्धनबाट कांग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै लिएपछि माओवादीले दुईवटा वडामा छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष अशोक थापाले अन्यत्र एमाले हराउन गठबन्धन भएको भए पनि रेसुंगा नगरपालिकामा कांग्रेस हराउन माओवादी छुट्टै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको बताए ।
त्यस्तै प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकामा पनि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच तालमेल भएको छ । अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका पीतबहादुर महतरा र उपाध्यक्षमा एमालेकी विष्णु जीएमले उम्मेदवारी दिएका छन् । वडातर्फ माओवादीले तीन र एमालेले पाँच वडाध्यक्षमा भागबन्डा गरेका छन् । झिमरुकमा जनमोर्चाको बलियो संगठन रहेकाले उसले नेतृत्व नछाडेपछि माओवादी एमालेसँग मिलेको हो । एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले प्रदेशका केही पालिकामा सत्ता गठबन्धनका दलसँग सहकार्य भएको बताए । रुकुम पूर्व र रोल्पाका केही पालिकामा पनि कांग्रेससँग एमालेले तालमेल गरेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ १२:०३
राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मेयरसहित २१ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
नागरिकता विधेयक पारित गर्न नेताहरूसँग कुरा गरेको छु : सभामुख
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, अन्य वस्तु र सेवाको पनि घट्नुपर्छ : मन्त्री बडू
सिकारी युगको 'साकेला सिली' सिक्दै सिलिमोपा र सिलिमोमा
सांसदको गणपूरक संख्या नपुग्दा प्रतिनिधिसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित
आधा शताब्दीअघि पाटनबाट चोरिएको विष्णु मूर्ति न्यूयोर्कमा